Maxey Soomaaliya uga dhigantahay ka bixitaanka Kenya ee kiiska Badda? | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Maxey Soomaaliya uga dhigantahay ka bixitaanka Kenya ee kiiska Badda?
Maxey Soomaaliya uga dhigantahay ka bixitaanka Kenya ee kiiska Badda?
Dowladda Kenya ayaa 11kii Bishan warqad rasmi ah u dirtay Maxkamadda ICJ oo berri billaabi lahayd dhegeysiga kiiska badda ee ka dhaxeeya kala dhaxeeya Soomaaliya.
Ergada Soomaaliya ku mataleysa kiiskaas ayaa 8ddii Bishan u duulay dalka Holland halkaas oo ay ugu diyaar garoobeen ka qeybgalka dhegeysiga Dacwadda.
Kenya ayaa dooddeeda ka bixitaanka sal uga dhgigtay laba arrimood oo kala ah; caabuqa Covid19 oo ay ku doodday in uu kala dhalntaalay kulanka Qareennadeeda Caalamiga ah iyo Xeerbeegtida ka socota iyada siuda Xeer Ilaaliyaha guud ee Kenya u uku dooday.
Qodobka 2aad ee ay Kenya qaatay ayaa waxaa uu yahay in 9ka Garsoore ee Maxkamadda uu ka midyahay C/Qawi Axmed Yuusuf oo Soomaali ah kaas oo Guddoomiyaha Maxkamadda ahaa ilaa February 2021,waxaana ay sheegtay in Ninkaasi dartii aysan sii wadeyn ka qeybgalka dhegeysiga kiiska Badda.
Maxkamadda ICJ ayaa waxaa ay Kenya tiro 3 jeer ah ka aqbashay dib u dhigidda Kiiska badda kaddib markii 2badii Feb 2017kii ay Maxkamadda ogolaatay dhegeysiga kiiska.
Dhamaan Kenya dib u dhigistaas waxaa ay ku doodeysay in ay wadahadal kula jirto Soomaaliya meel ka baxsan Maxkamaddana ay heshiis ku gaarayaan.
Laakiin Dowladda Soomaaliya ayaa dhamaan dib u dhigiddaas diideysay iyada oo ugu dambeyna Bishii September ee sanadkii 2019 Maxkamadda go’aamisay in dib loo dhegeysanayo 15ka March oo ku began berri.
Haddaba go’aanka Kenya muxuu uga dhiganyahay Soomaaliya?
Soomaaliya waxaa ay u badantahay in loo xukumo biyaha oo ay iyada leedahay haddaba hayeeshee ay Kenya damaacisay in ay sharci darro ku qaadato.
Sharciga Maxkamadda ICJ ayaa sheegaya in haddii dhinacyada ay kiis muddeysay uga soo qeybgeli waayaan si dhameystiran ay Maxkamadda sii wadeyso dhegeysiga dhinaca jooga.
Haddii dhinaca jooga uu soo jeediyo in xukunka isaga la siiyo oo dhiniciisa loo rido ay aqbaleyso Maxkamadda waxaase ka horreysa in sheegashada dhinacaas ay ku qanacdo Maxkamadda.
Soomaaliya oo kale ayaa qeybteeda la dhegeysanayaa maalmaha soo aaddan iyada oo aysan joogin Kenya waxaana ay u badantahay in go’aanka Maxkamadda oo soo baxaya dhowr bilood kaddib loo xukumo Soomaaliya sida ay sheegayaan Khubarrada Caalamiga ah.
Culimada dhinaca Sharciga Badda ee Afrika ayaa ku doodaya in kiiskan uu noqdo mid aan dhaafin Afrika laguna xalliyo Qaaradda Afrika hayeeshee marna ma aysan muujin dhexdhexaadnimo taasina waxaa ay Soomaaliya ku riixday in ay ku adkeysato ICJ.
Tallaalka Covid19 ee Soomaaliya oo laga dejinayo Garowe
DF oo lagu eedeeyay maqnaanshaha Madaxweynayaasha 3 Dowlad Goboleed